PowerChord: Centralized Local Lead Management uye Distribution yeDealer-Distributed Brands | Martech Zone
Iwo mabhurendi akakura anowana, zvikamu zvinofamba zvakanyanya zvinoonekwa. Zvigadzirwa zvinotengeswa kuburikidza netiweki yevatengesi vemunharaunda vane zvakatooma kunzwisisa seti yezvibodzwa zvebhizinesi, zvinonyanya kukosha, uye zviitiko zvepamhepo zvekufunga nezvazvo - kubva pachiratidzo chemhando kusvika padanho renzvimbo.
Zvigadzirwa zvinoda kuwanikwa zviri nyore uye kutengwa. Vatengesi vanoda mitsva mitsva, kufamba kwetsoka, uye kuwedzera kutengesa. Vatengi vanoda ruzivo rusina friction yekuunganidza uye kutenga ruzivo - uye vanoida nekukurumidza.
Zvinogona kutengesa zvinotungamira zvinogona kupera mukubwaira kweziso.
Kana mutengesi akasvika mukati memaminitsi mashanu achipikisa maminetsi makumi matatu, mikana yekubatanidza mhenyu inovandudza ka30. Uye mukana wekutungamira wakasangana mukati memaminitsi mashanu svetuka ne100 nguva.
Dambudziko nderekuti nzira yekutenga haiwanzo kukurumidza kana friction kune zvigadzirwa zvinotengeswa nevatengesi. Chii chinoitika kana mutengi akasiya webhusaiti yemhando yakanyatsocheneswa kuti aongorore kwekutenga munharaunda? Ko lead iyoyo yakatenderedza mutengesi wepano kana kuti yaunganidza huruva muinbox? Kutevera kwakaitika nekukurumidza sei - kana zvakadaro?
Iyo inzira inowanzotsamira pane yakasununguka zvinyorwa uye zvisingaenderane maitiro. Inzira izere nemikana yakarasika kune vese vane chekuita.
Uye iri kushandurwa nesoftware automation.
PowerChord mhinduro yeSaaS yemutengesi-anotengeswa mabhureki ane hunyanzvi mukutungamira manejimendi uye kugovera. Iyo yepakati papuratifomu inounza pamwe ane akanyanya simba CRM maturusi uye mabasa ekubika kuti awedzere inotungamira padanho renzvimbo kuburikidza neautomation, kumhanya, uye kuongorora. Pakupedzisira, PowerChord inobatsira mabhureki kuvaka hukama nevatengi vavo kutanga netiweki yavo yevatengesi, saka hapana chinotungamira chinoenda chisina kutendeuka.
Powerchord Lead Management uye Distribution
Mabrand nevatengesi vanogona kushandisa zvese PowerChord's Raira Center. Kuburikidza neCommand Center, mabhureki anogona kugovanisa vatungamiri - zvisinei kuti vakabva kupi - kune vatengesi vemunharaunda.
Vatengesi vanopihwa simba rekushandura izvo zvinotungamira mukutengesa. Mutengesi wega wega ane mukana wekutungamira manejimendi maturusi ekugadzirisa enzvimbo yavo yekutengesa funnel. Vese vashandi vepamutengesi vanogona kuwana ruzivo rwekutungamira kuti vakurumidze kutanga kuonana uye kuwedzera mukana wekutengesa. Sezvo inotungamira kufambira mberi kuburikidza nekutengesa funnel, vatengesi vanogona kuwedzera manotsi kuitira kuti munhu wese agare pane imwechete peji.
Nharaunda yekurevera yenharaunda inokwira kusvika kumhando kuitira kuti hutungamiriri hwekutengesa hugone kutarisa kufambira mberi munzvimbo dzese.
Sezvo kukurumidza kuonana kuri kiyi pakuvhara kutengesa, iyo yese PowerChord chikuva inotungamira kumhanya. Brands uye vatengesi vanoziviswa nezve mitsva inotungamira ipapo - kusanganisira kuburikidza neSMS. Izvi zvinogona kuva rubatsiro rwakakura kune vashandi vepanzvimbo yekutengesa vasingawanzo kusungwa padhesiki uye komputa zuva rese. PowerChord zvakare nguva pfupi yadarika yakatanga One Click Actions, chinhu chinobvumira vashandisi kugadzirisa mamiriro ekutungamira mukati meiyo email yekuzivisa vasingade kupinda muCommand Center.
Powerchord Analytics uye Kushuma
PowerChord inoisa pakati kushuma kuti ikwidzise mhando 'yenzvimbo yekutengesa kuedza. Vanogona kuona kupindirana kwevatengesi vemunharaunda - kusanganisira kudzvanya-ku-kufona, kudzvanya kwenzira, uye kutumira mafomu - munzvimbo imwechete uye kuona mafambiro avanoita nekufamba kwenguva. Iyo dashibhodhi zvakare inobvumira vatengesi kuti vaone maitiro ezvitoro zvemuno, senge zvigadzirwa zvepamusoro-soro, mapeji, uye maCTA, uye kuongorora mikana mitsva yekutendeuka.
Nekumisikidza, kushuma kunokwira kumusoro - zvichireva kuti mutengesi wega wega anogona kuona data ravo chete, mamaneja anogona kuona data renzvimbo yega yega yavanosungirira, nzira yese kusvika kune yepasirese maonero anowanikwa kune mhando. Mvumo inogona kugadzirirwa kuganhurira kuwana iyi data kana zvichidikanwa.
Vatengesi vemhando vanogonawo kuwana ruzivo rwemaitirwo emakambani avo ekushambadzira emunharaunda, kusanganisira mutengo pakukurukurirana, kudzvanya, kutendeuka uye zvimwe zvinangwa. PowerChord's Analytics uye Reporting ficha inobatanidza madotsi pakati pemadhiraivha nemari, ichibvumira mhando kuti:
Kuedza kwedu kushambadzira kwedhijitari kwakabatanidzwa nekutungamira kwedu kwekutungamira uye kuedza kwekugovera kwakapa madhora zviuru makumi mashanu mumari; 50,000% yeiyo yakashandurwa kuita yekutengesa, ichigadzira chiuru chinotungamira mwedzi wapfuura.
Kuunza izvi zvese pamwechete: Grasshopper Mowers inoshandisa PowerChord kusimudzira mawebhusaiti evatengesi venzvimbo uye inowedzera inotungamira 500%
Vacheki veMhashu inogadzira mamower egiredhi ekutengeserana anotengeswa chete kuburikidza netiweki yevatengesi vakazvimiririra vanosvika 1000 munyika yose. Iyo kambani yaiziva kuti pakanga paine mukana wekukwezva vatengi vatsva uye kukura chikamu chayo chemusika. Mukana iwoyo waiva mumaoko evatengesi veko.
Pakutanga, apo vangangove vatengi vakaongorora mitsara yechigadzirwa pawebhusaiti yeGrasshopper, mikana yekutengesa yakaderedzwa sezvavaidzvanya kuenda kunzvimbo dzevatengesi venzvimbo. Iyo Grasshopper branding yakanyangarika, uye nzvimbo dzevatengesi dzakaratidza makwikwi emidziyo mitsetse isina ruzivo rwemuchitoro, zvichikonzera kuvhiringidzika kwevatengi. Nekuda kweizvozvo, vatengesi vaive vasingachatarisi kutungamira kwavakabhadhara uye vachinetseka kuvhara kutengesa.
Kwemwedzi mitanhatu, Grasshopper yakashanda nePowerChord kukwidziridza rwendo-kune-yemunharaunda rwendo nekutarisa pane zvinotungamira, kugadzira dhijitari brand kuenderana, kushandisa otomatiki, uye kutsigira mu-musika kuedza kwevatengesi. Grasshopper yakawedzera inotungamira ne500% uye online inotungamira-yakagadzirwa kutengesa ne80% mugore rekutanga.
Dhawunirodha Yakazara Nyaya Yekudzidza Pano
Wawana Kutungamira. Zvino Chii?
Rimwe rematambudziko anotarisana nemabhizinesi kushandura kutungamira kuita kutengesa. Mari yekushambadzira yakakosha inoshandiswa kukwezva vatengi. Asi kana iwe usina masisitimu aripo ekupindura kune inotungamira yawakagadzira, saka madhora anoparara. Tsvagiridzo inoratidza hafu chete yevose vanotungamira vanobatika. Ita mari pakukura kwemaitiro ako ekushambadzira nekushandisa lead manejimendi akanakisa maitiro ekukanganisa zvakanyanya kutengesa kwako.
Pindura kune Yese Inotungamira - Ino inguva yekugovera ruzivo rwakakosha nezvechigadzirwa chako kana sevhisi uye kubatsira mutengi kuita sarudzo yekutenga. Inguva zvakare yekukodzera kutungamira uye kuona chikamu chekufarira chemumwe nemumwe angangoita mutengi. Kushandisa kutaurirana kwakakodzera uye kwakasarudzika kunosimudzira shanduko.
Kukurumidza Kupindura Kwakakosha -Kana mutengi achizadza fomu rako rekutungamira, vakagadzirira kutora nhanho inotevera murwendo rwavo rwekutenga. Vaita tsvakiridzo yakakwana kuti vafarire chigadzirwa chako uye vakagadzirira kunzwa kubva kwauri. Sekureva kweInsideSales.com, vatengesi vanotevera newebhu inotungamira mukati me5 maminetsi vane 9 nguva zvakanyanya mukana wekuvashandura.
Ita Nzira Yokutevera -Zvakakosha kuve negwara rakatsanangurwa rekuteedzera ma lead. Iwe haudi kurasikirwa nemikana nekusatevera nekukasira kana kukanganwa zvachose. Unogona kufunga nezvekudyara muCRM kana usati watoita - nenzira iyi unogona kuchengeta misi yekutevera, zvinyorwa zvine ruzivo nezvemutengi, uye kutovaita zvakare pane imwe nguva inotevera.
Sanganisira Vabatsiri Vakakosha muChirongwa chako -Kumutengesi anotengeswa mabhureki, kutengeswa kunoitika mumunhu padanho renzvimbo. Izvi zvinoreva kuti mutengesi wepanzvimbo ndiyo yekupedzisira kubata pamberi pekuvhara. Simbisa mutengesi wako network nematurusi ekuvabatsira kuvhara - zvingave zviri izvo zvinovaita vakangwara pachigadzirwa chako kana otomatiki mhinduro dzekubatsira nekutungamira manejimendi uye nguva dzekupindura.
‍Wana zvimwe zviwanikwa paPowerChord blog
Tags: Dealermutengesi anotungamira analyticsdealership analyticsdealership lead analyticsdealership lead reportingmadhirimhashuvacheki vemhashutungamira analyticslead distributionkutungamira manejimendipowerchord